माथिल्लो तामाकोशी आयोजनामा लगानी साढे ३४ अर्ब भन्दा बढी !
काठमाडौं– राष्ट्रिय गौरवको माथिल्लो तामाकोशी आयोजना निर्माणका लागि साढे ३४ अर्ब भन्दा बढी रकम खर्च भएको छ । स्वदेशी लगानीमा निर्माणधिन आयोजना निर्माणका लागि असार मसान्तसम्म ३४ अर्ब ६४ करोड खर्च भएको आयोजनाका प्रवक्ता डा. गणेश न्यौपानेले जानकारी दिए ।
विगु गाउँपालिकाको लामावगरमा निर्माणधिन आयोजना सुरुमा ३५ अर्ब २९ करोड लागतमा निर्माण सक्ने भनिएपनि भूकम्प, नाकाबन्दी र पहिरोका कारण काम रोकिदाँ लागत र समय दुवै बढ्ने भएको हो । अहिले ४१ अर्ब ७२ करोड लागतमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
आयोजनाका प्रवक्ता न्यौपानेले अहिले पनि सिन्धुपाल्चोकको खाडीचौरबाट चरिकोटसम्म सडक स्तरन्नोती गर्ने काम भइरहेको र वर्षातको समयमा सडक हिलाम्मे हुँदा पेनस्टक पाइप, सिमेन्ट जस्ता निर्माण सामग्री ढुृवानी गर्न समस्या भएको बताए ।
आयोजनाको अहिले मुख्य सुरुङ र माथिल्लो पेनस्टक स्याफ्टमा कमजोर चट्टान आएको हुँदा त्यसका लागि सर्पोट वर्कस् गर्दे सुरुङ खन्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइएको बताइएको छ । आयाजनाको लागि आवश्यक निर्माण सामग्रीहरु लमोसाँघु–चरिकोट खण्डबाट ढुवानी गर्न कठिनाइ भएकोले वैकल्पिक रुपमा खुर्कोट र खिम्ति हुँदै आयोजनास्थलसम्म ढुवानी गर्ने गरिएको छ । यस्तै ठूला उपकरण तथा पेनस्टक पाइपहरु सुनकोशी विद्युतगृहमा भण्डारण गरिएको आयोजनाले जनाएको छ ।
यसैगरी आयोजनाको हेडवक्स कंक्रिट कार्य ८९.५ प्रतिशत सम्पन्न भएको छ भने मुख्य सुरुङ खन्ने कार्य ९३ प्रतिशत सम्पन्न भएको छ । यसैगरी टेलरेस सुरुङ खन्ने कार्य र विद्युतगृह र ट्रान्सफर्मर क्याभर्न खन्ने कार्यसम्पन्न भइसकेको छ । अडिट लगाएत अन्य सुरुङहरु खन्ने कार्य ८५.३ प्रतिशत सकिएको छ । विद्युतगृह र ट्रान्सफर्मर क्यार्भन कंक्रिट कार्य ८३.८ प्रतिशत सम्पन्न भएको छ ।
भारतले दिएको कोरोना खोप आजदेखि प्रदेशमा पठाइँदै